Umyili oyintloko welogo entsha ye-Instagram uza kuyikhusela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
U-Ian Spalter, umyili oyintloko we-Instagram, uphuma ekhusela i-logo entsha
Uyilo olutsha lwe-Instagram logo ndafumana ukugxekwa okuninzi ngabasebenzisi abaninzi kunye namajelo eendaba. Akululanga ukwenza utshintsho olukhulu kwinkonzo esetyenziswe kwaye ethandwayo zizigidi zabantu kwaye ungafumani izimvo ezimbi ngokubuyisela. Kuqhelekile ukuba ndicinge.
Uyilo olutsha apho ukhona igxininisa ukuchukumisa okuncinci Kwimizobo yelogo kunye nokuba yintoni imvelaphi enezinto ezinemibala eyahlukeneyo, ikwazile ukwenza i-logo ye-Instagram iye phezulu kumajelo eendaba amaninzi kwiintsuku ezidlulileyo. U-Ian Spalter uye ngaphambili ukumkhusela.
Amazwi akhe aya kuzithethelela notshintsho olwenziwe apho bayidlalile ngenguqu ebonakalayo kunye nomlinganiswa ongaphezulu. Amagama akhe abonisa ubunzima bokwenza ilogo: «Besifuna ukuya ngaphi? Ukuba ilogo ayibonakali, ayibophelelwanga kumoya we-Instagram. Ukuba oku kuyinyani, akukho lula ukuthethelela utshintsho«.
Sicinga ukuba la mathandabuzo yile nto kufuneka bayisombulule, ukuze bayisebenzele ukuyila into ilogo ehambelana namaxesha Ukubaleka kunye nokutshintsha kwenkonzo ngokwayo, eye yasuka yaba sisicelo sokuhlela kunye nokwabelana ngeefoto ukuya kwiividiyo kunye nokudibana kwemvakalelo kunye namava kwizigidi zabantu kwihlabathi liphela.
Iqela le-Instagram ngokwalo kubuze abantu abahlanu yenkampani echaze ilogo, kwaye akukho namnye wakwaziyo ukuphawula ukuba ilensi kunye nomnyama yayilelinye lamagama abonisa icon yale nkonzo, ke amathandabuzo ahlala ngenxa yezigqibo ezithathiweyo.
Phantse kwiveki ephelileyo sithathe inkqubo yokudala Ukusuka kwilogo ukuya kuphawu lomfuziselo, njengeGuinness, apho safunda khona, ukuba bahamba ngeendlela ezininzi zokuyila ukuze ekugqibeleni bafike kwilogo yokugqibela. I-logo ye-Instagram iye yahamba kwezinye iisayithi ukufumana eso siphumo, kungoko sinokuzibuza ukuba kutheni bengathathanga uncedo lwangaphandle fumana ingcebiso kungcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » U-Ian Spalter, umyili oyintloko we-Instagram, uphuma ekhusela i-logo entsha
Isikhokelo esitsha soYilo lwezixhobo